Download ngwa nke Samsung Galaxy Experience for your Galaxy | Gam akporosis
[APK] Etu ibudata ma wụnye ihe ntanye ahụmịhe Samsung na Galaxy gị
Manuel Ramirez | | APK, Ngwa gam akporo, Nkuzi
Samsung Ahụmahụ igba egbe bụ Korean ika si ngwa launcher nke ahụ emeela ka ọtụtụ ndị gafere Nova Launcher ma jaa ezi ọrụ a na-arụ site na ahụmịhe ahụ e nyere ọtụtụ afọ gara aga na ekwentị ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ugbu a i nwere ike budata APK nke mbipute Samsung Ahụmịhe Mbido maka Akara achịcha, ma ọ bụ ihe bụ ụdị 9 nke ga-amalite n'oge na-adịghị anya bia na nnukwu ndepụta nke mobiles. Anyị ga-agwakwa gị maka mgbanwe doro anya nke onye na-ebupụta ngwa ngwa nke na-eme ntakịrị iji nye ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
0.1 Ihe ị ga-ebu n’uche tupu ị wụnye ihe nrụpụta ahụmịhe Samsung
1 Etu ibudata ma wụnye ihe mbido Samsung si na gam akporo achịcha
2 Ozi banyere Samsung launcher
Ihe ị ga-ebu n’uche tupu ị wụnye ihe nrụpụta ahụmịhe Samsung
Ejirila APK a site na XDA Forums, nke dịworị E nyere ya nkwado nke ịbụ n'ihu APK dị ọcha. Na leaker kwuru na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ọtọ na o siri ike ọ bụla chinchi, n'ihi ya, ọ na-atụ aro iji ya maka ihe ọ bụla nke Galaxy.
Na mbu, Ihe Nleba Ahụmahụ Samsung nwere ike arụnyere na Galaxy ọ bụla nwere gam akporo 8.0 Oreo. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị nwere Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note FE, Galaxy Note FE, Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 + na Galaxy Note 9, ị nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe ọhụụ nke onye nno onwe ya nke ika Korea.
Anyi aghaghi ikwu na na Galaxy S9 nke anyi nwalere ya, na-emechi n'ụzọ na-enweghị isi na-enweghị ụzọ inwe ike iji ya. Dị ka ọ nwere ike ime na ụfọdụ n'ime gị gafere ọnọdụ a siri ike, anyị na-akwado ka ị gbanyụọ ihuenyo wee kpọghee ekwentị, ka ị nwee ike ịhọrọ ihe ndabara na-ebido site na ịpị igodo ụlọ.
Ma ọ bụ na mgbe mmechi ma ọ bụ ọdịda ahụ na-ezighi ezi pụtara, ihuenyo freezes na-enweghị ike ime ihe ọ bụla, iche site na kwuru gbanyụọ ihuenyo na kpọghee ya ọzọ. Anyị na-ekwu maka APK nke lebara anya na XDA Forums.
Etu ibudata ma wụnye ihe mbido Samsung si na gam akporo achịcha
Iji budata ma wụnye Ihe Nleta Ahụmahụ Samsung, anyị ga-arụ usoro ndị a dị mfe, mana tupu anyị echetara gị na mgbe ị wụnye onye na-ebupụta ihe, ga - apụta dị ka nsụgharị standalone nke ị tinyegoro na Samsung Galaxy gị.
Budata ngwa site na njikọ a Site n'aka onye mmepe XDA Forums.
Ozugbo emere nke a, anyị ga-etinye APK dịka ọ bụla ọzọ.
The launcher ga-arụnyere dị ka ọzọ onwe ha na otu onye ị nwere.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepụ ya, Naanị ị ga-aga Ntọala> Ngwa. Nsogbu dị n'ụdị nwụnye a bụ na mmelite a ga - adị mgbe niile na nke na - abata na mbụ, yabụ iji nwalee ya mgbe gam akporo achịcha rutere Galaxy, ọ dị ezigbo mma.
Ozi banyere Samsung launcher
Nke mbu, wijetị ọchụchọ Google na-egosi na ala, dị ka ụkpụrụ na ekwentị ndị ọzọ na gam akporo. Ihe omuma ohuru bu na akara ngosi di uku na drawer ngwa, dika odi na folda aputara n'otu ebe. O nwekwara ihe ngosi ohuru maka ntinye ulo Bixby; N'agbanyeghị, ikekwe Samsung Buds na-etinye ya.
Obere ihe ị ga-ekwu, ma e wezụga myirịta nke ị ga-ahụ na ụdị nke ị wụnyere na Galaxy gị. Nke ahụ kwuru, cheta na anyị na-eche ihu APK nke leaked firmware version. Enwere ike ịgbakwunye atụmatụ ọhụrụ na ọnwa ndị na - abịanụ tupu iwepụta ya na mbido 2019.
Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu na lWụnye ma bido ihe ngosiputa ihe omuma nke gam akporo gam akporo, ị nwere ike ịmalite ịta ụta maka ihe na-echere gị na nwelite ngwa ngwa ọzọ nke Samsung Galaxy nso. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-eme otu ihe ahụ na mbata na ụbọchị ole na ole nke Google Pixel 3 na ọganihu ndị ahụ anyị na-atụ anya ga-eme na foto; lee ị nwere ọdụ ụgbọ mmiri GCam maka Galaxy S9 ma si otú a nwee obi ụtọ na omume ọma na algọridim nke nnukwu G maka sọftụwia igwefoto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Etu ibudata ma wụnye ihe ntanye ahụmịhe Samsung na Galaxy gị
Ọ naghị arụ ọrụ na Nkọwa 8 m
Kedu ihe bụ VPN na gịnị ka ọ bụ maka?
Etu esi amata ihe ngwa gam akporo na-eri data kachasị